किन आयो नयाँ शक्ति सडकमा ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
किन आयो नयाँ शक्ति सडकमा ?
नेपाल- भारत २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै भद्रकालीमा शुक्रबार दिउँसो नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्ताले एक घण्टा धर्ना दिए । नयाँ शक्तिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार राजधानीमा धर्ना दिएको हो । पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसहितको उपस्थितिमा भद्रकालीमा शुक्रबार दिउँसो नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्ताले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले जनताका सरोकारहरुका मुद्दाहरुमा नयाँ शक्तिले विशेष ध्यान दिने बताए । भट्टराईले २५ बुँदेले नेपाल भुटानीकरणतर्फ जाने गम्भीर खतरा पैदा भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरे ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य जारी गर्नुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसका कयौं बुँदाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुर्‍याएको मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हाम्रो स्वाभिमानलाई समेत गम्भीर चोट पुर्‍याउने र भुटानीकरणतर्फ जाने गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य खारेज गर्नुपर्छ ।’
भट्टराईले पहिचान र सामार्थ्यको आधारविपरीत गएर सरकारले पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरे । पञ्चायतकालीयन संरचनालाई ब्यूँताएर प्रतिगमनतर्फ जाने षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ । साथै उनले अब संविधान संशोधन गर्दा मुलुकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा लैजानुपर्नेमा जोग दिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था नभएसम्म मुलुकमा स्थायीत्व र आर्थिक विकास नहुने वताए ।